Yakazara Hondo: Matatu Humambo hwave kuwanikwa hweLinux uye macOS | Linux Vakapindwa muropa
Feral Inopindirana yakave nemufaro we zivisa el kuburitswa kweHondo Yese: Matatu Humambo paLinux uye macOS. Mutambo unogadzirwa neCreative Assembly uye wakaburitswa neSega asi, semamwe mitambo yakaita tsvina 4, iyo kambani yeBritish ndiyo yave ichitarisira kuisa mutambo kune masisitimu anoshanda ayo Microsoft isingasimudzi. Kusiyana nezvimwe zvaburitswa, uyu mutambo-wekusimbisa zano mutambo wasvika kune ese desktop masisitimu anoshanda panguva imwe chete.
Yakazara Hondo: Matatu Humambo ndeye shanduka yakavakirwa sarudzo mutambo. Kana ini ndisina kukanganisa, yekutanga kana imwe yekutanga mitambo yekutendeuka-based yaive Risk. Zvakaoma kwandiri kuti ndikanganisa, sezvo Njodzi yakatanga sebhodhi mutambo weavo vatakatamba nebhodhi, madhishi uye kunyange makadhi. Kufamba kwenguva kwakaita kuti aya marudzi emitambo achinje uye sevha inofarira, semuenzaniso, X-COM. Dingindira remutambo waburitswa nhasi zvakare ihondo, asi izvi zvinoitika kuChina uye muna 190 AD
1 Yakazara Hondo: Matatu Humambo anowanikwa pane Steam
1.1 Izvo zvidiki uye zvinokurudzirwa zvinodiwa
Yakazara Hondo: Matatu Humambo anowanikwa pane Steam
Yakazara Hondo Humambo inowanikwa kubva chiutsi nokuti mutengo we € 59.99 uye panguva yekunyora uku vari kuita kutepfenyura kwepamoyo kwe Gameplay. Unogona kuiwana paYouTube kubva pano.
Izvo zvidiki uye zvinokurudzirwa zvinodiwa
OS: Ubuntu 18.04 (64bit) (ndizvo zvazvinotaura kupinda kubva kuUbuntu)
Graphic Plate: AMD R9 285 2GB kana zvirinani, Nvidia GTX 680 2GB kana zvirinani AMD RX 480 4GB kana zvirinani, Nvidia GTX 970 4GB kana zvirinani
Sezvauri kuona, tiri kutaura nezvemutambo usingamhanye zvakanaka pamakomputa ane zviwanikwa zvishoma, nekuti zvinotora 8GB kuti ishande. Iwe zvakare unofanirwa kushandisa yazvino vhezheni vhezheni yeLinux.
Iwe uchakwanisa here kubatanidza iwo matatu humambo uye uve wega mambo weChina?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yese Hondo: Humambo hutatu hwave kuwanikwa kune Linux uye macOS